initial - Synonyms of initial | Antonyms of initial | Definition of initial | Example of initial | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for initial
Top 30 analogous words or synonyms for initial
ဆလီနီအာကာသယာဉ် On October 3, it entered an initial polar lunar orbit.
ရုရှားသဒ္ဒါ The word order expresses the logical stress, and the degree of definiteness. Primary emphasis tends to be initial, withaslightly weaker emphasis at the end.
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ကနဦးလေ့လာမှုအဆင့် (Initial phase)၊ စမ်းသပ်ကွင်းဆင်းအဆင့် (Preparation Phase)နှင့် တည်ဆောက်မှု အဆင့် ၁ (Construction Phase 1)၊ အဆင့် ၂ (Construction Phase 2)၊ အဆင့် ၃ (Construction Phase 3) ဟူ၍ အဆင့် ၅ ဆင့်ခွဲ၍ စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
ဟေလီယိုစဖီးယား ၂၀၀၈၊ အောက်တိုဘာတွင်လွှတ်တင်ခဲ့သော ကြယ်ကြားနယ်ခြားမျဉ်း လေ့လာရေးယာဉ် (IBEX)မှ ရရှိသောအချက်အလက်များအရ revealedapreviously unpredicted "very narrow ribbon that is two to three times brighter than anything else in the sky." Initial interpretations suggest that "the interstellar environment has far more influence on structuring the heliosphere than anyone previously believed"
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ ၇၅။ ထိုသို့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရာတွင် အိုင်ဗင်ဟိုး ကုမ္ပဏီက သုံးသပ် စိစစ်ထားမှု တို့သည် အသေးစိတ် စနစ်တကျ လေ့လာစိစစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး မူလ စိုက်ထုတ်ငွေ(Initial outlay) ဒေါ်လာ ၃၁၃ သန်းပေါ်တွင် စီမံကိန်း ကာလအတွင်း ဝင်ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၃၇၁၃ ဒသမ သုည သန်း ရှိမည်ဟု မှန်းဆထားပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်စကမှာ ဒေါ်လာ ၁၄၂၆ သန်းဟု ခန့်မှန်းထားပြီး အစိုးရ အခွန်အခ စသည်တို့မှာ ဒေါ်လာသန်း ၂၆၇ သန်းဟု ခန့်မှန်းခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအတွက် အခွန်အခ မပေးသွင်းမီ ဝင်ငွေမှာ ဒေါ်လာ ၁၄၄၇ သန်းဟုလည်း ခန့်မှန်းခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံချက်၏ အကျိုးအမြတ် တို့သည် ကြေးနီ ဈေးနှုန်းပေါ်တွင် တည်မှီသည်ဟုလည်း သုံးသပ်ထားပါသည်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ The Soviet Union captured V-1s when they overran the Blizna test range in Poland. The 10Kh was their copy of the V-1, later called Izdeliye 10. Initial tests began in March 1945 atatest range in Tashkent with further launches from ground sites and from aircraft of improved versions continuing into the late 1940s. The inaccuracy of the guidance system compared to new methods such as beam-riding and TV guidance saw development end in the early 1950s.
ဘတ်ဂျက် ဥပမာ- ရထားသည် ကားထက် ကနဦးစရိတ် initial cost ကြီးသော်လည်း နှောင်းပိုင်း later cost မပြောပလောက်အောင် ရှိမည်။ ဘတ်ဂျက်၏ ထိရောက်မှု ဆိုရာတွင် စီးပွားရေး ပြဿနာများ ကာကွယ် ကုစားရေးနှင့် တိုင်းပြည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည်တို့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဟူသော မေခရိုဘောဂဗေ macro economic ရှုထောင့်လည်း ပါသည်။ ဘတ်ဂျက် ဘက်ညီသည် ဆိုခြင်းမှာ ရှုပ်ထွေးလှသော ယနေ့ဘက် ခေတ်တွင် ဘယ်သောအခါမျှ မရှိသော အရာဖြစ်သည်။ အခွန်နှုန်းထား လျှော့ချလာရပြီး အခွန်အမည်စုံ တိုးချဲ့မှုကိုလည်း (၁) ပို့ကုန် ဈေးကွက် ပြိုင်ဆိုင်နိုင်အား မကြီးမားရေး-ဈေးကွက် မူဝါဒနှင့် (၂) စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၌ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး R&D၊ လူသားရင်းမြစ် သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးရေး၊ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ ဝန်ဆောင်မှုတွင်ရော စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ပါ နည်းပညာသစ်တို့ လေ့လာ တီထွင်ဝယ်ယူ သုံးစွဲရေး စသည့် အရင်းအနှီးများ သုံးစွဲနိုင်ရေး-စက်မှု မူဝါဒ စသည်တို့အားဖြင့် ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးတွင် ကျင့်သုံးနေကြရသည်။
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် The first operational aircraft, christened "Spirit of Missouri", was delivered to Whiteman Air Force Base, Missouri, where the fleet is based, on 17 December 1993. The B-2 reached initial operational capability (IOC) on 1 January 1997. Depot maintenance for the B-2 is accomplished by U.S. Air Force contractor support and managed at Oklahoma City Air Logistics Center at Tinker Air Force Base. Originally designed to deliver nuclear weapons, modern usage has shifted towardsaflexible role with conventional and nuclear capability.
မီယာအာကာသစခန်း The initial rendezvous of the "Kvant"-1 module with "Mir" on5April 1987 was troubled by the failure of the onboard control system. After the failure of the second attempt to dock, the resident cosmonauts, [[Yuri Romanenko]] and [[Aleksandr Laveykin]], conducted an EVA to fix the problem. They foundatrash bag which had been left in orbit after the departure of one of the previous cargo ships and was now located between the module and the station, which prevented the docking. After removing the bag docking could be completed on 12 April.